Zeziphi Izinto Ekusekwe kuzo inqanaba lokuLungiselela ukuSebenza?
ikhaya / Zeziphi Izinto Ekusekwe kuzo inqanaba lokuLungiselela ukuSebenza?
Khetha Kuyenzeka xa umntu esiva kusweleka isalamane esisondeleyo, eshiya into yexabiso ngasemva. Nokuba kukho umyolelo okanye akukho myolelo kwaye ukufa kwalomntu kubangela ukuba kwenzeke. Inkqubo yinkqubo esemthethweni neyonganyelweyo yenkundla eqinisekisa ukuba abantu abafanelekileyo banikwa amalungelo kunye noxanduva kwilifa lomntu oswelekileyo.
Zeziphi ezinye zezinto onokukhetha ukuziphepha?
Kukho iindlela ezimbalwa zokukhusela i-probate. Ngokuyintloko, ungadlulisela kwi-deed ekufeni, okwenziwa rhoqo kwiiakhawunti zebhanki. Nangona kunjalo, ukuba ipropathi inepropathi yendawo yokuhlala okanye ipropathi, kufuneka ihambe kwinkqubo yokuhlola. Ezinye izixhobo ezisetyenziswa ngabantu ukunqanda iiprosesa ngamathemba.
Kwenzeka ntoni kanye ngexesha lenkqubo yoKhetho?
Kukho amanqanaba amane okuphambili. Inqanaba lokuqala liza kwinkundla yamatyala kwaye lifayila uxwebhu lokuvula. Nje ukuba kuvulwe ityala, kuya kufuneka unike uluhlu lwezinto kunye nokunika isaziso kuwo onke amaqela anomdla. Amaqela anomdla anokuba ngabaxhamli, iindlalifa, okanye abantu ababambeleyo. Isaziso senzelwe ukuba abantu babandakanyeke kwinkqubo. Inqanaba elilandelayo, xa umntu ethe wonyulwa ukuba abe ngumphathi okanye umgwebi, ulawula ipropathi. Ukulawulwa kwepropathi kubandakanya ukuhlawula amatyala, ukukhathalela iiasethi, ukuqiniseka ukuba iirhafu ziyahlawulwa, qinisekisa ukuba i-inshurensi iyahlawulwa, kunye nokudluliselwa kwezindlu. Umlawuli unoxanduva lokwandisa ixabiso leeasethi. Inqanaba lokugqibela lenkqubo ye-probate kukuvala ipropathi kwaye oko kubaluleke kakhulu kuyo.
Umlawuli okanye umgwebi kufanele ukuba afumane into ebizwa ngokuba yimali ebuyiselweyo kunye nokukhululwa okutyikitywe ngumntu ngamnye ofumana isibonelelo phantsi kwepropathi ukuze abo bantu bangabikho emva kwabo kamva. Ezo fomu ziya kufakwa kwinkundla yamatyala kwaye yiyo loo nto ivala ilifa. Ukuvalwa kuthatha inxaxheba ngakumbi ukuba kukho iindlalifa ezifuna ukucwangciswa ngokusemthethweni, kodwa oko akuhlali kwenzeka. Uninzi lwexesha, i-accountally engekho semthethweni yanele.
Ngaba ukho umntu onokuthi ukuHamba ngeNkohliso ngaphandle kweGqwetha?
Zininzi imingxunya yokuzama inkqubo yokujonga ngaphandle kwegqwetha. Umgwebi unoxanduva oluninzi kwaye maninzi amanyathelo ekufuneka athatyathwe ukwenzela ukuba umgwebi angabikho kwi-hook, kamva. Nje ukuba ungene ekushishinini ngee-asethi, unike inothisi, uluhlu lweempahla, uqinisekisa ukuba unyusa ixabiso lepropathi, kwaye uqinisekisa ukuba abantu abafanele bayifumana ipropathi, ufuna ingcebiso kwezomthetho.
Ndicinga ukuba abantu bazama ukonga iidola ezimbalwa kwaye bayeke ukuyichitha ngezinye iindlela kuba bengakwenzi kakuhle. Andiqondi ukuba kukho umntu ofanele enze ngaphandle kwabo ngaphandle kokuba banepropathi elula kakhulu. Ukuba unayo iakhawunti enye ngasemva ene- $ 2,000 kuyo, ke awudingi igqwetha. Ukuba kukho ii-asethi zepropathi, ii-akhawunti ezininzi, okanye izibonelelo ezininzi, udinga igqwetha.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi Inkqubo yokuKhetha eNew York State, i iseshoni yesicwangciso sobuchule lelona nyathelo lakho lilandelayo. Fumana ulwazi kunye neempendulo zomthetho ozifunayo ngokufowuna (973) 200-1111 namhlanje.